Soomaaliya oo heshiis taageero farsamo la saxiixatay UPU – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Soomaaliya oo heshiis taageero farsamo la saxiixatay UPU
Sabti, Abril 13-2019(HNN)- Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada ayaa heshiis kaalmo farsamo la saxiixatay Ururka Boostada Adduunka (UPU), kaas oo dalkeena looga caawin doono qaabka ugu habboon ee dib loogu soo nooleyn karo adeegga boostada.
Danjire Bishaar oo ka hadlay munaasabadda saxiixa ayaa sheegay in mashruucan uu la mid yahay ‘dhibic ku dhacday badweyn’ marka loo eego baahida ballaaran ee ay qabto boostada Soomaaliya, hase yeeshee taageeradan ay tahay mid go’an oo la siiyo dalalka soo koraya, balse uu rajeynayo inay xigi doonaan kaalmooyin kale. Wuxuu ballanqaaday inuu u qareemi doono, kana codsan doono xubnaha UPU in Soomaaliya la garab istaago xilligan adag. Mar uu ka hadlayay fursadaha ay haysato Soomaaliya, wuxuu sheegay in dalku leeyahay mustaqbal wanaagsan marka la eego sida Soomaalidu u leeyihiin karti ay ganacsi ku hal-abuuraan.
Soomaaliya oo heshiis taageero farsamo la saxiixatay UPU added by admin on 13/04/2019